Kulamada ugu fiican Ciyaaraha Guys ee loogu talagalay Android | Androidsis
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Dayrta Guys ee loogu talagalay Android
Manuel Ramirez | 05/04/2021 20:00 | Ciyaaraha Android
Waxay u dhowdahay cabsi in la yeesho fikrad naxdin leh oo aad u soo saartid ciyaar aan miisaaniyad ku filan oo aad ku qarash gareyso xayeysiinta iyo suuqgeynta, sidaas darteed, inta lagu guurinayo halbeegyo badan, waad la xiriiri kartaa dhagaystayaashaas oo ku siinaya baalasha ku filan si ay u noqdaan Guy Guys ama Dooxada Stardew.
Aan raacno Ciyaaraha ugu fiican ee Ciyaaraha Gabdhaha ee loogu talagalay Android iyo in bilo gudahood, laga soo bilaabo xagaaga, ay u soo baxeen sida xuubka dhirta oo kale saldhigyada ciyaartan oo lagu soo qaatay daraasadda mas'uulka ka ahayd horumarinta Epic Games toddobaad ka hor. U tag.
1 Goobaha Dagaalama Royale
4 Caqli xumaa
5 Hoos u dhaca Fluffy: Deg-deg oo ka fogow khatarta!
6 Siyaabo carrab la 'oo loo dhinto: Superheroes
7 Xiddigaha Hex
8 Slider Dabeyl
10 Guys Guys: Knockout Royale
11 Xisbiga Royale: Ha dhicin!
13 Wiilasha Fall: Tartanka Ciyaaraha Ultimate Multiplayer
14 Guys Fur - Ultimaten Knockout
Goobaha Dagaalama Royale
Y inta aan sugeyno Guall Guys inay ku soo degto Android mar uunMaaddaama la sii horumarinayo, waxaan la socon doonnaa midkan, kan ugu horreeya liiska noocyada ciyaaraha ee 'Guall Guys'. Halkan waxaan u galnay inaan ku ciyaarno 32 ciyaartoy khariidad weyn ama fagaarayaal ay ku jiraan hub iyo hub kala duwan oo fara badan oo loo adeegsado in aan isaga difaacno kuwa kale. Dhammaan waxa ugu fiican, mid kasta ciyaarta ayaa socota daqiiqado yar. Aragtida isometric ee kudhow Battle Royale marka loo eego Fall Guys, laakiin waa lacag la'aan.
Hadday taasi tahay waxay la mid tahay Fall Guys waxayna sidoo kale bixisaa ciyaartoy badan si aad waqti fiican ugu heli karto daqiiqadahaas qosolka badan ee noocan ah ciyaarta badiyaa ay siiso. Gaar ahaan cilmiga fiisigiska iyo sida kuwa Yellow Humor u tijaabiyaan (in 90-ka TV-ga laga daawado Tele 5) ay aad u xiiso badan yihiin. Waxay na siineysaa seddex qaab oo ciyaarta ah: tartan, qaab qaylo iyo qaab ka dhan ah dadka kale. Waxaan horumarin karnaa inaan wajahno koox weyn oo ciyaartoy ah.
Marka waad awoodaa iftiiminta Noodleman.io ayaa loogu talagalay awoodeeda inay bixiso ciyaartoy badan labadaba deegaanka iyo khadka tooska ah, sidaas ayay noqon kartaa ciyaar kaamil ah laba mobiil marka aan guriga joogno. Waxa kale oo ay leedahay fiisigis shey xiiso leh iyo qaab nacas nimo ah sida ciyaarta hadda ay iibsadeen Epic Games. Xitaa waxay leedahay cayayaanka qaarkood oo noo ogolaanaya xitaa inaan ku qoslo waqtiyada qaarkood, sida ciyaartoyda qaar ay wax u faalleeyaan. Bilaash sida inta badan cayaaraha liiskan.
Noodleman.io - La Dagaalanka Ciyaaraha Xisbiga
Halkan waxaan galeynaa 39-cayaaryahan taas oo ay tahay inaan marka hore ku dhammeysano oo inta hartay uga harno tartanka guusha. Iyagu ma ay joojin isticmaalka Dayrta si ay isu aqoonsadaan, iyo rabitaanka ah inay awoodaan inay ciyaaraan ciyaar sida Fall Guys, liiskan isku-dhejiska ah ma istaago inuu soo jiito dareenka. Waxaanan ka hadlaynaa ciyaaro gaaraya tobanaan ama boqollaal kun oo dib u eegis ah. Waxay horeyba u leedahay ciyaartoy badan oo ah mid ka mid ah cusbooneysiinta soo daahay markii la sii daayay, sidaa darteed waxba kama dhinna.
Dudes Fall (Helitaanka Hore)
Developer: Istuudiyaha PepUp
Hoos u dhaca Fluffy: Deg-deg oo ka fogow khatarta!
Iyo hada waxaan u tagnaa mid ka mid ah kuwa leh in ka badan 100.000 oo faallooyin, laakiin taas oo aad uga fog ciyaartoy badan oo noqda hal ciyaar nooca Fall Guys. Dabcan, waa inaad iska ilaalisaa daraasiin caqabado ah si halyeeyada saaxiibtinimada leh uu uga bixi karo heerarkan si aad ah gacmaha looga shaqeeyay sidaa darteed ay adag tahay in laga gudbo. Ciyaar da 'kasta leh oo aadan seegi karin, in kasta oo aad tabi doontid ciyaartoy badan iyo astaamaha nacasnimada leh fiisigiska walxaha
Developer: WAA (Ciyaaraha)
Siyaabo carrab la 'oo loo dhinto: Superheroes
Waxaan markale u qaadan doonnaa ciyaartoy badan ciyaar heer sare ah oo aan ku qabaneyno superhero muuqaallo qosol leh iyo taas waxaan wajihi doonaa AI ama Sirdoonka Cilmiga ah ee ciyaarta. Taasi waa, waa inaan iska ilaalino caqabadaha, boodno oo u dhaqaaqno waqtiga saxda ah si aanan u burburin farsamooyinka kala duwan ee heer kasta. Taas oo jidka ag fadhida, mid kasta oo ka mid ah si aad ah loogu talagalay inay tahay inuu barto dhaqdhaqaaq kasta oo sidaas darteed uu u maro tijaabooyin ku saleysan khaladaadka. Bilaash oo in kasta oo aanu lahayn wax soo degsasho ah sida kuwa kale, waa ciyaar si caddaalad ah loo ilaaliyo heerarkeeda oo dhan.
Developer: Tareennada Metro ee Melbourne
Mid kale oo ka mid ah Guall Guys guys oo ku jira Haa waxaan leenahay ciyaartoy badan oo khadka tooska ah ku ciyaara waana taasi badda lagu raaxeysto, Maaddaama aan haysanno dhammaan ciyaartoydii halkan ka boodaya oo isku dayaya inay ku dhacaan fagaarayaasha laba-geesoodka ah ee u oggolaanaya inay sii noolaadaan inta kalena ay luminayaan toodii. Waad furi kartaa hargaha oo waxaad ku raaxeysan kartaa ciyaar aan lahayn soo dejin iyo dib u eegisyo badan, laakiin hubaal markii aad isku daydo waxaad yeelan doontaa ciyaaro wanaagsan.
Developer: Daa'im Studio
Waxaan xoogaa ka leexanaa ciyaar la mid ah kuwa badan, laakiin waxay leedahay aragti xiiso leh shaxankaas isometric-ka ah si ay diiradda u saaraan tuubo ay ka muuqato dabeecadeena. Waa inaan ka faa'iideysanaa kor u kaca iyo hoos u dhaca si aan isugu dayno inaan dhammeyno kahor AI ee aan wajaheyno. Ciyaar midabkeedu aad u badan yahay isla markaana nuqul ka sameysan bilicsanaanta kor ku xusan. Waxay sidoo kale diiradda saaraysaa dallad naga caawin doonta inaan u isticmaalno dabaysha inay si dhakhso leh u socoto. Ciyaar bilaash ah oo aan lahayn dib u eegisyo badan, laakiin waxaan kugula talinaynaa khadadkaan ku jira Androidsis.
Developer: Ciyaaraha isboortiga mudan
Sidoo kale nooma muuqato in aan la ciyaareyno ciyaartoy ama bots, laakiin waxaan wajahaynaa ciyaar kale oo dheellitiran oo ka mid ah jilayaasha liiskan. Waxay aad uga hooseysaa celceliska dhibcaha iyo soo dejinta kuwa kale, laakiin waxaan ku ridi karnaa wareegga 'Guall Guys'. Midabbo iyo heerar kala duwan oo loogu talagalay raaxaysigeenna.
Guys Guys: Knockout Royale
Aad u fiican garaaf ahaan iyo qaab wanaagsan, saldhig leh horumar weyn iyo ciyaartoy badan taas oo ka dhigeysa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee lagu ciyaaro liistadaan. Kama tagi karno ninkaan Fall Guys maadaama uu ka mid yahay kuwa ugu fiican. Naafada ugu weyn ayaa ah in cayaaruhu isku mid yihiin, taas oo macnaheedu yahay inaad runtii ku ciyaareyso "hooska" ama "cirfiidyada" ciyaartoy kale. Waxaan ula jeedaa, waxay qaateen magiciisa waxayna umuuqataa inuu yahay ciyaar gammy, laakiin runtii isagu waa bot. Si kastaba xaalku ha ahaadee, micnaheedu maahan inaan leenahay dareenka ah inaan la ciyaarno kuwa kale.
Xisbiga Royale: Ha dhicin!
Halkan waxaan ku leenahay ciyaartoy badan waqtiga dhabta ah si aan ula kulanno jilayaal kale oo qosol badan oo ah ciyaartoy dhab ah. Sidoo kale sifiican ayaa loo shaqeeyey oo leh dhibco celcelis weyn oo ka badan 40.000 dib u eegis. Haa waa run in hargaha waa in la iibsadaa, oo waxay leedahay mushaarkaas si loogu guuleysto dhibcaha qaar gaar ahaan, laakiin guud ahaan waa wax lagu farxo oo ah mid kale oo ka mid ah cayaaraha ugu fiican liiska oo lagu tartamo laguna qoslo joogsi la'aan.
Haa dhab ahaantii Soda Guys wuxuu ka digayaa bogga Google Play wuxuu la mid yahay Fall Guys, waa wax. Waxayna si fiican u ogyihiin inay koobiyeen makaanikada aasaasiga ah ee ciyaarta, in kasta oo hantidooda ay iyagu iska leeyihiin. Markaa haddii aad raadineyso wax la mid ah kuwa aan soo sheegnay ee ay soo iibsadeen Ciyaaraha Epic, ha lumin waqtiga si aad ugu tijaabiso fiisikiskeeda, ciyaartoy badan oo waqti-dheeri ah iyo heerarka na imtixaanka na gelin doona. In kasta oo ay wali tahay wax qarsoodi ah haddii aan la ciyaarno bots ama ciyaartoy waqtiga dhabta ah ...
Soda Guys (marin hore)
Developer: Ciyaaraha Hoptimist
Wiilasha Fall: Tartanka Ciyaaraha Ultimate Multiplayer
Ciyaaraha 30 ciyaartoy waxaan si toos ah ugu aadnaa multiplayer-ka khadka tooska ah oo leh 12 qaabab ciyaar oo kala duwan iyo 51 astaamo kala duwan oo aad furi karto. Waxay noqon kartaa mid ka mid ah nuqulada ugu xiisaha badan dhammaan Fall Guys list, gaar ahaan maadaama aysan wax badan ku kici doonin in la qabto waxyaabaha la furayo iyo sababta oo ah waxay leedahay astaamo badan. Waxaan ka gudubnay in ka badan 4.000 oo dib u eegis ah si aan u noqonno mid kale oo ka mid ah kuwa ugu caansan iyo in ay si wanaagsan ugu dhejiyeen Play Store. Jilayaashu uma noqon karaan kuwo si wanaagsan loo qaabeeyey sida aad filan karto, laakiin guud ahaan waa ciyaar wanaagsan in lala istaago kuwa kale.
Guys Fur - Ultimaten Knockout
Waxaanan ciyaartan ku saarnay liistada maxaa yeelay xitaa iskama jaraan adeegsiga isla magaca, in kastoo ay isticmaalaan "Fur" ka "Furries" sidaa darteed waxaan haysannaa xoogaa xayawaan ah inay yihiin xayawaan guri joog ah iyo in kale. Waxay leedahay ciyaartoy badan oo khadka tooska ah ku ciyaara, sawiro tayo wanaagsan leh, farsamooyin dhameystiran iyo wax yar oo carqaladeeya ama xumeeya khibrada ciyaaraha. Waa run inaysan u sahlaneyn sida kuwa kale, laakiin waxay kugu siineysaa inaad xitaa ka sii mid ahaato noocyada kale ee Ciyaaraha Fall Guys ee aan ku haysano moobilkeena Android.
Guys Fur - Ultimate Knockout
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Dayrta Guys ee loogu talagalay Android
[VIDEO] Sida loo habeeyo shaashadda qufulka ee Samsung Galaxy